Ninka ugu ciddiyaha dheer dunida oo iska jaray ciddiyihiisa 66 sano kadib! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Ninka ugu ciddiyaha dheer dunida oo iska jaray ciddiyihiisa 66 sano kadib!
Ninka ugu ciddiyaha dheer dunida oo iska jaray ciddiyihiisa 66 sano kadib!
Ninka ugu ciddiyaha dheer dunida oo iska jaray ciddiyihiisa 66 sano kadib
India (Halqaran.com) – Ninkan oo ahaa qofkii ugu ciddiyaha dheeraa adduunka ayaa ugu dambeyntii iska jaray. Shridhar Chillal oo u dhashay waddanka Hindiya ayaa bilaabay in uusan jarin ciddiyaha gacantiisa bidix markii uu ahaa 14-jir, sida laga soo xigtay Guinness World Record.
Isagoo hadda ah 82-jir wuxuuna heystaa rikoorka ciddiyaha ugu dheer hal gacan, Chillal ayaa u duulay Mareykanka si looga jaro ciddiyaha iyadoo la isticmaalay miinshaar yar, iyadoo lagu soo bandhigay xaflad ka dhacday matxafka Ripley oo ku yaalla Times Square.
Chillal doorashadiisii aan caadiga aheyn ee uu ku balaariyey ciddiyihiisa muddo dheer kama hor istaagin inuu ku noolaado nolol caadi ah, matxafka Ripley ayaa sheegay in ninkaan uu guursaday isla markaasna ay u joogaan laba carruur ah isagoona ku soo shaqeeyay xirfadda sawir-qaadista.